Zizofudumala izaguga kulobusika | News24
Zizofudumala izaguga kulobusika
ABESIFAZANE abangamalungu oMgunundlovu Regional Taxi Council babungaze imbokodo eyizaguga yakwaSwayimane ngezingubo zokulala njengoba kusaqhubeka imigubho yenyanga yabesifazane.
Imbokodo eyizaguga engu-28 igixabezwe ngezingubo zokulala ukubabungaza nokuphinde igubhe lolu suku kanye nabo.
Abesilisa nabo abazange basale ngaphandle njengoba idlanzana labo lihlomule ngazo izingubo zokulala. Usihlalo wedesiki labesimame (women desk) kuMgungundlovu Regional Taxi Council uMenzi Ngubane uthe lokhu into njengomama bemboni yamatekisi abayenza minyaka yonke uma kusuke kugujwa inyanga yabesifazane.
Uthe lokhu kusuke kuwuphawu lokukhombisa ukunakekela kanye nokuzwelana nalobo mama bona abasuke bengakwazi ukuthi bazenzele noma kube nezinto abazithengela zona bona qobo lwabo. “Kulokhu sithe ake sijubalale siye eSwayimane ngoba isikhathi esiningi noma esidlulile lokhu besikwenza lapha eMgungundlovu kuphela. Kuthina siyimbokodo esembonini yamatekisi kusifikele ukukhumbula ukuthi amatekisi ethu awagcini nje kuphela lapha eMgungundlovu kodwa ahamba aze afike e Mooi River nakwezainye izindawo ezisondelene nakhona. Sihlanganile-ke sabe sesicela omama bangakuzo lezi zindawo ukuthi basibhekele abantu abangadinga usizo. Babe sebebakhetha base besazisa ukuthi bangobani nokuyibo-ke esibe sesibathengele izingubo ukuze bafudumale kulobu busika,” kusho uNgubane.
Kulo mcimbi bekukhona nabavela ohlangoothini lwezenhlalakahle. Omunye wezihambeli ezivela kuMnyango wokuThuthukiswa koMphakathi nguNksz Khwezi Njoko obonge wanconcoza ngalesi senzo sosomathethisi besimame baseMgungundlovu. UNjoko uthe lesi senzo sabesifazane bemboni yamatekisi siyancomeka kakhulu. Omunye wezaguga ezihlomule ngezingubo ugogo uFakazile Gcumisa (69) wasendaweni yase-Ekupholeni uthe ujabulile kakhulu.
“Kusukela namhlanje ngizolala ngale Ngubo,” kusho lesi isaguga.
UNgubane ululeke imbokodo iziphathe kahle.
“Kuningi okuye kuqhamuke kube yizithiyo kodwa owesifazane oqotho uyamelana nazo futhi aqikelele ukuthi akabi yisisulu sezinto ezimbi,” kusho uNgubane